လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နှင့် သူ၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် ဖြစ်ရပ်မှန် စ/ဆုံး
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောက မှာ ထွက်ပေါ် ခဲ့တဲ့ လူမိုက် တစ်ရာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို လူကြိုက် အတော်များခဲ့ ပါတယ်..။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါ က ရန်ကုန်မြို့မှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဦးဖိုးတုတ် ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း ကို ရိုက်ကူး ထားတယ် လို့လည်း ပြောနေ ဆိုနေတာတွေ ကြားခဲ့ဖူး ပါတယ်။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် လူမိုက် တစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကို မင်းက ဘာလို့ ဒီလောက် ရှင်းချက်တွေ ထုတ်နေတာ လဲဆိုပြီး မေးလာ သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်ရှင်းပါ့မယ်။
ဦးဖိုးတုတ် ဟာ ကိုလိုနီခေတ် မှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက် မရှိ နာမည် အကျော်ကြားဆုံး မြန်မာ လူမျိုး လူမိုက် တစ်ဦးပါ ယို့ယွင်းနေတဲ့ ကိုလိုနီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် နဲ့အတူ လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ကြီးစိုးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ လူမျိုးခြား မိုက်တွေကို နှိပ်ကွပ် ခဲ့ပြီး မြန်မာတွေ ဘက်ကရပ်တည်ပေး ခဲ့တဲ့ မြန်မာ လူမိုက်ကြီး ပါ ။
မခံချင် စိတ်ကြောင့် အသက်ငယ်ငယ် မှာ လူဆိုး လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ ရပေမယ့် ဦးဖိုး တုတ်ဟာ လူယုတ်မာ တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး..။ခေတ်ရဲ့ သားကောင် အဖြစ် လူဆိုး လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ လမ်းမတော် ဦးဖိုးတုတ်ရဲ့ တစ်ခြား မျက်နှာတစ်ဖက် မှာ ရှိနေတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ လွတ်လပ်ရေး ကိုမြတ်နိုးစိတ် ဆိုတဲ့ ဇာတိမာန်လေး ကို တွြေ့ မင်စေ ချင်လို့ ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး သမိုင်းအချက်အလက် အမှားတွေကို အမှန်လို့ မထင်စေချင်လို့ ဒီစာ ကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဆိုတာ ဦးကျော်ဟိန်း ရိုက်ခဲ့ တဲ့ လမ်းမတော် ဖိုးတေ ရုပ်ရှင် ထဲကလို ဖိုးတုတ် ဟာ ကုန်ထမ်း သမားတစ်ယောက် မဟုတ် သလို ဖိုးတုတ်ရဲ့ လူမိုက် ဘ၀ ဟာ အစပြုခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး ဖိုးတုတ် ရဲ့ မိခင် ကြီးဒေါ်ချစ်ပု ဟာ ရန်ကုန်မြို့ (၁၄)လမ်းမှာ ဈေးရောင်းပြီး အတန်အသင့် ချောင်လည်တဲ့ မိသားစုပါ ။
ဦးလေးတော် သူ ရဲ့ မြို့တွင်း ဆွဲ မော်တော်ကား မှာ စပါယ်ယာ လိုက်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မဟုတ်မခံ စိတ်ကြောင့် ခဏခဏ ရိုက်မှုဖြစ် ပြီး အလုပ်ထွက်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဖိုးတုတ်ရဲ့ လူမိုက် ဘ၀က………..ဒီလိုစပါတယ်..ဖိုးတုတ် ကို လူမိုက် ဘ၀ရောက်အောင် စတင်ခဲ့တဲ့ သူကတော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ခေတ် မတိုင်ခင် လမ်းမတော် လူမိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့……….ပုဏားဘထွန်း ပါပဲ…။
အဲ့ဒီခေတ်က လမ်းမတော် မှာ ပုဏားဘထွန်း ၊ သိမ်ကြီးဈေး လှဖေ ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကျောက်တံတား မတ်စတီးခန်း ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ကြက်ကျား ၊ ဘားလမ်း ဟူစိန် ဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့ မှာ သူ့အပိုင်း နဲ့သူ အပိုင် စား လူမိုက် ကြီးတွေ ကြီးစိုးခဲ့ပါတယ် ရန်ကုန်မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပုလိပ်အင်အားနဲ့လူဦးရေ မမျှတဲ့အတွက်
ပုလိပ်တွေ ဟာ နယ်မြေတိုင်းက အပိုင်စား လူမိုက်တွေကို ခါးပိုက်ဆောင်ထဲ ထည့်ပြီး အုပ်ချုပ် ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ် ။နယ်မြေ အပိုင် လူမိုက်တွေ ဟာ ကိုယ်ပိုင် နက် နယ်မြေထဲက ဒုစရိုက်မှု က ရတဲ့ငွေကြေး ၊ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် စီးပွားရေး သမားတွေ ရဲ့ မိမိစီးပွားရေး မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးဖို့ ပေးတဲ့ လစဉ်ကြေးကို ခံစားလေ့ ရှိပါတယ်..။
ပုဏားဘထွန်းက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် နာမည်ကြီး ပါ တယ်။ ပုဏား ဘထွန်း ရဲ့ နောက် မှာ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကကုလား သူဌေးတစ်ဦးလည်းဖြစ် လူမိုက် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ မတ် စတီးခန်း ရှိပါ တယ်။ ပြီးတော့ ပုလိပ်မင်းကြီးနဲ့လည်း ပုဏားဘထွန်း ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ အင်မတန်ရင်းနှီးတယ် လို့ နာမည်ကြီး ပါတယ် အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ဖိုးတုတ် ကလည်း လမ်းမတော် တ၀ိုက်မှာ နည်းနည်းလေးနာမည် ထွက်လာတဲ့ ဇ ရှိတဲ့ လူငယ်ခြေတက် ကလေးပေါ့..။
ဖိုးတုတ် က ဆင်းရဲသား မဟုတ် ၊ မိုက်ကြေးခွဲခံ ရတဲ့အထဲ မပါပေမယ့် လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ရန်ကုန်မြို့ ထဲ စိုးမိုးခြယ်လှယ်နေတာ ကို လုံးဝ မကျေနပ် ၊ မြန်မာ လူမျိုးတွေ သတ္တိ နည်းလို့ လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ဗိုလ်ကျခံနေရတာ ကို မနှစ်မြို့ ၊
ပြီးတော့ သိမ်ကြီးဈေး လှဖေ တို့လို မြန်မာ လူမိုက်တွေ ကလည်း ကိုယ့် အပိုင် နယ်လောက်မှာ သာ ကျယ်နိုင်ပြီး တစ်ခြားနယ်တွေမှာ ကုလား လူမိုက်တွေ မြန်မာ လူမျိုးတွေကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို လက်ရှောင်နေတတ် ကြတာ ဟာ ဒီကုလား လူမိုက်တွေကို မြန်မာ လူမိုက်တွေ က ကြောက်လို့ပဲလို့ ယူဆမိပြီး ခံပြင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ လူမိုက်လောက ထဲ ၀င်ဖို့ ဖိုးတုတ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ပိုမို ခိုင်မာစေမဲ့… ကိစ္စတစ်ခု ပေါ်လာ ပါတော့ တယ် ပြသနာက ဒါလ်ဟိုဇီလမ်း မှာအပိုင်စားပြီး ဈေးသည်တွေ ကို မိုက်ကြေးလိုက် ခွဲနေတဲ့ မတ်စတီးခန်း ရဲ့ တပည့် မာမွတ် နဲ့ဖိုးတုတ် တို့ စကားများရာ က ဖိုးတုတ် က မာမွတ်ကို မူလီခေါင်းတပ် တုတ် နဲ့ မသေ မရှင်ရိုက်လိုက်ရာ က စတာပါ..။
မာမွတ်ကို ရိုက်လိုက်တဲ့ ကိစ္စအတွက် လူမိုက်ကြောနောကြေနေ တဲ့ မတ်စတီးခန်း က သူ့တပည့်ကုလား လူမိုက်တွေ ကို ဖိုးတုတ်ကို ရန်သွား မရှာကြဖို့ ၊ ဖိုးတုတ် ဟာ မီးခဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး တားမြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်..ဒါပေမယ့် မာမွတ် ကိစ္စမကျေနပ် တဲ့ မတ်စတီးခန်း တပည့် နှစ်ယောက်က ဖိုးတုတ် ကို ပြသနာ ရှာကြရာ မှာ နှစ်ယောက်လုံး ဖိုးတုတ် က ဓါးမြောင် နဲ့ထိုးလွှတ်လိုက်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် လည်း မတ်စတီးခန်းရော ၊ ပုဏားဘထွန်း ပါ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ဖိုးတုတ် ကို ပြသနာ လာမရှာကြတာကိုက ဖိုးတုတ်အတွက် ၀ိရောဓိဖြစ်စရာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် ..ပုဏားဘထွန်းက သူ့လူကို ထိရင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်တတ်သည် ဆိုတာ ရာဇ၀င်တွေ ရှိတာကို ဖိုးတုတ်သိ သည်..
ဒီအတိုင်း ထိုင်နေပြီး သူလာမယ့် အချိန် စောင့်နေတာ ထက် ပုဏားကို သွားရှင်းမည်။ ပြီးတော့ နယ်မြေ အပိုင်လူမိုက်တွေ ကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဆက်ရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ တယ်………..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ဖိုးတုတ် လူမိုက်ဖြစ်သွားပြီ..၁၉၃၂ ခုနှစ် ၊ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော် (၁၁)လမ်း ၊လမ်းမတော် တစ်ရပ်ကွက်လုံး မှ ဆင်းရဲသား ၊ လူချမ်းသာ ၊ ဖိုးတုတ် ၏ မိဘများပါ မကျန် ဖိန့်ဖိန့် တုန်အောင် ကြောက်ရွံ့ရသော ၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ အခြားနယ်မြေ အပိုင်စား လူမိုက် အချင်းချင်းပင် ဆရာကြီး ဟု ရှေ့က တပ်ခေါ် ရလေသော ပုဏားဘထွန်း ၏ အိမ်ရှေ့သို့ မြနေအောင်သွေးထားသည့် ငှက်ကြီးတောင် ဓါးဖြင့် လူမိုက်ပေါက်စ တစ်ယောက်ရပ်နေသည်…။
ဖိုးတုတ်……ငှက်ကြီးတောင်ဓါး ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ပြီး တစ်ယောက်ချင်း ဓါးချင်း ယှဉ်ခုတ်မည် အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ ဖို့ စိန်ခေါ်ပါတယ် တပည့်တပန်း အလွန်ပေါများပြီး လူမိုက် အချင်းချင်းပင် ကြောက်ရသော လူမိုက်ကြီး ပုဏားဘထွန်း အ်ိမ်ပေါ်က လုံးဝ ဆင်းမလာ တကယ်တော့ ပုဏားဘထွန်းနဲ့ ဖိုးတုတ် အသက်ချင်း အရွယ်ချင်း ကွာလွန်းနေပြီ ။
ဘယ်လောက်ပဲ မိုက်ခဲ့ မိုက်ခဲ့ နွားအို က ပေါင်ကျိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ ပုဏား အနေဖြင့် ဖိုးတုတ် နှင့် တစ်ယောယ်ချင်း ယှဉ်လို့ မဖြစ် နိုင်တော့မှန်း သိသည်.. အိမ်ပေါ်က လုံးဝဆင်းမလာ အကြိမ်ကြိမ် စိန်ခေါ်ပြီး ဖိုးတုတ်က စကားတစ်ခွန်းပြော သွားသည် ။
” ခင်ဗျားက လူမိုက် ပုဏား မဟုတ်တော့ဘူး.. ဆန်တောင်းတဲ့ ပုဏ္ဍားဖြစ်သွားပြီ…ဖိုးတုတ် က ဒီနေ့က စပြီး လမ်းမတော် လူမိုက်ဖြစ်သွားပြီ ”တကယ့် ၀ါရင့်လူမိုက်ကြီး ပုဏားဘထွန်း ကိုပင် အိမ်ရှေ့သွား စိန်ခေါ်သော ဖိုးတုတ် သတင်း က တစ်ခြား နယ်ပယ် ပိုင် လူမိုက်ကြီးတွေကြား ဂရက် ရိုက်သွားပါတော့တယ်…အဲ့ဒီလို နဲ့ ရန်ကုန် လူမိုက်လောက မှာ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် က အချိန်တို အတွင်း နေရာရခဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ကတော့ လမ်းမတော် တစ်ရပ်ကွက်ထဲ မှာ ထိုင်ပြီး မင်းမူနေရုံ နဲ့ ကျေနပ် နိုင်သူ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဖိုးတုတ် ပထမဆုံး မျက်စောင်းထိုးတာ ကတော့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ပါ.. ။
ပန်းဆိုးတန်းလမ်း မှာက ဗိုလ်တစ်ထောင် ၊ ကျောက်တံတား လူမိုက် မတ်စတီးခန်း ကြီးစိုးနေပါတယ် မတ်စတီးခန်း က တော့ သူ့လက်ရုံး မာမွတ်ကိစ္စပြီး ကတည်းက ဖိုးတုတ်ကိုေ၇ှာင်ဖို့ သူ့တပည့်တွေကို မှာပါတယ်..
ကုလားလူမိုက် (၃)ယောက် သေလုမျောပါး ဒဏ်ရာရသွားကြပြီး ကျန်တဲ့ လူမိုက်တွေလည်းခွေးပြေး ၀က်ပြေး ပြေးခဲ့ ရပါတော့တယ်…. ဒီအချိန်က စလို့ မက်စတီးခန်း ဟာ ပန်းဆိုးတန်း ကို ဖိုးတုတ်လက် ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကို ငမိုးလက် အပ်ပြီး လူမိုက်လောက ကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ် သွားပါတော့ တယ်..လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် နဲ့ မရှေးမနှောင်း မှာပဲ ဓားရေးကြွယ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး ရဲ့ နာမည် ဟာလည်း ရန်ကုန် လူမိုက်လောက မှာ တဖြည်းဖြည်းကြီးမား လာပါတော့တယ်..။
ငမိုး ပခုံးချင်းယှဉ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် က သူ့ထုံးစံ အတိုင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတော့တယ်..ရန်ကုန်ရဲ့ ချမ်းစီးစီး ဒီဇင်ဘာ မနက်ခင်း တစ်ခုမှာ သက္ကလပ် အင်္ကျီအထူစားအောက်မှာ ဓားရှည် တစ်ချောင်း ကို လွယ်ပြီး ဘိုကလေးဈေး (ဘရုတ်ကင်းဈေး) လမ်းထဲ ကို ၀င်လာတဲ့ ဖိုးတုတ် ကို တွေ့ရပါတယ်..။
ဖိုးတုတ်က ဗိုလ်တစ်ထောင်ငမိုးအိမ်ရှေ့ရပ်လိုက်တယ်ဆိုလျှင်ပဲ…ငမိုးဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ပြူးပြူး ပြာပြာဖြစ် သွားပါတယ် …. ငမိုး ချက်ချင်း အိမ်ပေါ်ကပြေးဆင်းပြီး လာရင်း ကိစ္စကိုမေး ပါတော့တယ်.ဖိုးတုတ် က သက္ကလပ် အင်္ကျီ ကို ဆွဲချွတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုကော့ပေးသည်.. အေး ငမိုး မင်းဓါးရေးထက် တယ်ဆိုလို့ ငါလာ အထိုးခံကြည့်တာ ဟု အော်ကြီး ဟစ်ကျယ်ပြောတော့သည် ။
ငမိုးကလည်း လူနပ်…။ ပုဏားလိုတော့ အရှက်ကွဲ မခံနိုင် ။ ဒီတော့ ဖိုးတုတ် ကို ပြုံးပြရင်း”ဟာ အကိုကြီး ကလည်း မဟုတ်တာ ဒီအကြောင်းတွေ မပြောပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဗမာညီအစ်ကို ချင်း ကြား မှာ ဒါမျိုးတွေရှိသေးလားဗျာ.. အကိုတွေ့ချင်ရင်ခေါ်ခိုင်း လိုက်ပေါ့..တကူးတက ကျွန်တော့်ဆီ လာနေရ တယ်လို့”
“အေး မင်းက ဗိုလ်တစ်ထောင် မှာ ဗိုလ်မထားဘူး ဆိုလို့.. ငါကလည်း ဗိုလ်လာ လုပ်တာလေကွာ”“ဟာ အကိုကြီးရာ ကျွန်တော့် ကို မကြိုက်တာရှိရင် ဆုံးမလို့ရပါတယ်.. နာခံပါ့မယ်..ကျွန်တော် အကိုကြီး ကို ဧည့်ဝတ်ပြုပါရစေ ”ဖိုးတုတ် ဘာမှ မပြောတော့ပါ… ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး … နယ်မြေ ချင်း စည်းမကျော် ဖို့သာပြော ခဲ့ပြီး ..။
အပြန်တွင်တော့ အလာတုန်း ကလို မဟုတ်…………ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုးပိုင် ရထားလုံးနှင့် ဖိုးတုတ်ကို အိမ်အရောက် လိုက်ပြန်ပို့ပေးပါတော့တယ်………….အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး သေဒဏ် ကျသွားတဲ့ အချိန်အထိ ဖိုးတုတ်နဲ့ ငမိုးတို့ဟာ သံခင်း တမန်ခင်း ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဘာပြသနာ မှ ထပ်မဖြစ်ကြတော့ပါဘူး..။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ၀င်ငွေက တစ်လလျှင် (၃၀၀၀)နီးပါး ရှိသည် ဟု ခန့်မှန်းကြ သလို ဖယ်မလီယာ ကား(၂)စီးနှင့် မော်တော် တစီးပိုင်သည် အထိ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လာခဲ့တော့သည်..လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်က ရာဇ၀တ်မှုများ လိုက်ရာတွင် နာမည်ကြီးသော ရှေ့နေကြီး ပန်ကာအေးကို လို လူကို ပင် ဥပဒေ အကြံပေးအဖြစ် လစာပေး ငှားထားလိုက်သေးသည်..
လူမိုက် ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား ဆိုသော ဆိုရိုးစကား ရှိပါတယ်… ဖိုးတုတ် က ဂျိုနဲ့ လူမိုက် မဟုတ်ပေမယ့် နှလုံးသား နဲ့ လူမိုက်ပါ……….ဖိုးတုတ် နှလုံးသား ကို ညှိငင် ဖမ်းစားထားတာ က လမ်းမတော် သူ တရုတ်ကပြား မသင်းမြ..မသင်းမြ က အဖေ မရှိတော့ အမေနဲ့အဒေါ်က လမ်းမတော် (၂၄)လမ်း၊ ကွမ်းတန်းဈေး တွင် ဈေးရောင်း တဲ့ သူတွေ.. ဖိုးတုတ် အမေနဲ့ မသင်းမြ အမေက ဥပုသ်စောင့် ၊ ဘုရားသွား အတူတူ လူရင်းတွေ..။
ငွေရေးကြေးရေးတောင့်တင်းပြီး ဖိုးတုတ် အမေ ဒေါ်ချစ်ပု ငွေလို လျှင် မသင်းမြ တို့ မိဘတွေ က ထောက် ပံ့နေကြ။ မသင်းမြ ကို ဖိုးတုတ် ကြိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဖွင့်မပြောရဲ ခဲ့… မသင်းမြ ရှေ့ရောက် လျှင်ပင် လူမိုက်ကြီး က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စကားမပြောရဲရှာ ..ဒါပေမယ့် တပည့် အရင်းတွေ..အပေါင်းအသင်း အရင်းတွေ နဲ့ အတူတူသောက်ကြတဲ့ အရက်ဝိုင်း မှာတော့ ဖိုးတုတ်ကြီး ရဲ့ ရင်တွင်းဝေဒနာတွေ က အန်အန် ထွက်လာ တတ်လို့….
ဖိုးတုတ် ရင်တွင်းက အချစ် ဓာတ်တွေ ကို သူ့ညီ ဘသိန်းနဲ့ တပည့် ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ လသာ လူမိုက် စံဘသောင်းရီ (ခေါ်) ဂန္ဒမာ ဆောင်းရင် ၊ ကမ်းနားလမ်း အုန်းဖေ ၊ လွစ်စ်လမ်း ငညွန့် ၊ တာမွေအောင်ဘ ၊ လက်ကောက် ချန်ထွန်း တို့က အူမချေးခါး မကြားချင် မှ အဆုံး သိထားပြီးသား..။
မသင်းမြ က ဘာသာ တရားရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ကြီးပြင်း လာခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ပီပီ ဖိုးတုတ်လို နာမည် ကြီး လူမိုက် ကို ဝေးဝေးရှောင် ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မသင်းမြက ဖိုးတုတ်ညီ ကိုဘသိန်း နဲ့တော့ တော်တော် ရင်းနှီးပါတယ်တဲ့……။ဈေးထဲမှာ မသင်းမြ ကလည်း မဟုတ်မခံ ဇတ်ဇတ်ကြဲ…ဆိုတော့ ဘသိန်း က သူ့အကိုနဲ့ စိတ်ချင်းတူ သဟဲ့ ဆိုပြီး မသင်းမြ ကို သူ့အကို ဖိုးတုတ်နဲ့ ကြိတ် သဘောတူနေပါတယ် ။
ခင်မောင်ရင် ကားနဲ့ ဖိုးတုတ် ကို အိမ်အထိ လိုက်ပို့ကြပြီး သူငယ်ချင်းတွေပြန်သွားကြတော့ ဖိုးတုတ် အိပ်ပျော်သွား ပါလေရောလား..မနက် မိုးလင်းတော့ အခန်း တံခါးခေါက်သံကြောင့် ဖိုးတုတ် တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့…သူ့ညီ ဘသိန်း နဲ့ တပည့်တွေက မိန်းမ တစ်ယောက်ကို အတင်းဆွဲခေါ်လာပြီး ဖိုးတုတ် အခန်းထဲ အတင်း တွန်းပို့တော့ ပါလေရော..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်“ဟေ့ ကောင်တွေ ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ”“အကိုပဲ ညက မသင်းမြ ကို မရရင် သေတော့မယ်ဆို..အဲ့ဒါနဲ့ ကျုပ်တို့ စီမံလာပေးတာ” ဘသိန်း က ပြောပြော ဆိုဆိုနှင့် တံခါးကို ဆွဲပိတ် လိုက်ပြီး အပြင်က သော့ခတ် လိုက်ပါတော့တယ်..။(အမှန်က မင်းသား ခင်မောင်ရင် စနက်ပါ..
ကိုဖိုးတုတ် ကိုလိုက်ပို့ရင်း ကနေ ဖိုးတုတ် ညီနဲ့တပည့် တွေကို မင်းတို့ အကိုတော့ မသင်းမြ ကို မရရင် နန်းသီတာ ဆိပ်က ခုန်ချမယ် လုပ်နေလို့ မူးအောင် တိုက်ပြီးပြန်ခေါ် လာတာ ဆိုပြီး သရုပ်ဆောင်ပြ သွားတာကို တပည့်တွေက အတည် ထင်ပြီး အခုလို လုပ်ပေး လိုက်ကြတာပါ..ပဲ)ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ ကို ဒေါသ ထွက်သလို..မသင်းမြ ကို အားနာနေသည် ။
မသင်းမြ က ငိုယိုနေတာမြင် ရတော့ သူ စိတ်မကောင်း.. ပြီးတော့ မသင်းမြ အမေတွေ က သူ့အမေ ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ…. အခုတော့ ဘသိန်း နဲ့ တပည့်တွေကြောင့် အမေ မျက်နှာပျက် ရတော့မည်.. ဖိုးတုတ် ကို ဆဲသည် ။ ဖိုးတုတ်က ရှင်းပြသည် ။တကယ်တော့ ဘသိန်း နှင့်တပည့်များ က မသင်းမြ အိမ်ကနေ ဈေးကို အထွက်မှာ ကားပေါ် တင်ဆွဲလာ ခဲ့ခြင်းတဲ့…..
သားလုပ် သမျှ ချိုသည် ခါးသည် မပြောဖူးသော မိခင်ကြီး ဒေါ်ချစ်ပု က အခု နာနာကြည်းကြည်းနှင့် လာပြော သွားတဲ့ စကားက…..ဖိုးတုတ် ကို ယမ်းပုံ မီးကျစေပါတော့တယ်။“ဖိုးတုတ် နင် လူမိုက် ရုံတင် မကတော့ဘူး လူလိမ် လူယုတ်မာဖြစ်နေပြီ….
ငါတို့ ဈေးရောင်းစား လာ တာ တစ်သက်လုံး သူတစ်ပါး ပစ္စည်းကိုမလိမ်မညာ ခဲ့ဘူး..နင့် ကျမှ တစ်ဈေး လုံး ဟိုးဟိုးကျော် ကလိမ် ဖိုးတုတ်ဖြစ်နေပါလားဟဲ့” တဲ့ ။တပည့်တွေ ကို စုံစမ်းခိုင်းကြည့်တော့ ဟုတ်သည် ။
ဖိုးတုတ် ဓါးဆွဲပြီး ဆင်းလာခဲ့သည်………………..အဲ့ဒီ ဖိုးတုတ် က ဘယ်သူလဲ ။ ကြာကြာ မစုံစမ်းရ..လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်တော့ မဟုတ် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် တဲ့ ပွဲစား ဖိုးတုတ်လို့လဲ ခေါ်သတဲ့..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်…..လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ကြောင့် ဒေါသထွက်ရပြီမကြာမီ……..ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ လက်ထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ မူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် ပါလာ ပါတော့တယ်..လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကို အထင်သေး သည့် အမူအယာဖြင့် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်က ကြည့်လိုက်သည်။
“ခင်ဗျား..ဘယ်သူလဲ..ကျုပ်ကို ဘယ်သူမှတ် လို့ ဒီလိုခေါ်လာတာလဲ ..သေချင်လို့လား”
လမ်း(၃၀) က ဟောက်သည်..လမ်းမတော် က ရယ်သည်…ကျုပ်နာမည် ဖိုးတုတ်ဗျ..ဖိုးတုတ်..ခင်ဗျားကြားဖူးတယ် မှတ်လား” လမ်း(၃၀) က ထပ်ဟောက်သည်။“အေး မင်းက ဖိုးတုတ် ဆို ရော့..”လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကိုင်နေကျ မူလီခေါင်းတပ် ကြိမ်လုံးက လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် မျက်နှာပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ကျသွားသည် ။
လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ခွေသွားသည်..။“ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ..ကျုပ် အကြောင်း မသိသေးဘူး ထင်တယ်”“အေး..မင်း ငါ့ကို သိက္ခာချ တယ်..လူလိမ်..ခွေး”“ကျုပ် အလုပ်ကျုပ် လုပ်တာ ခင်ဗျားကို ဘာသိက္ခာ ချနေလို့လဲ”လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ကလည်း…….ပြန် ခံပက်သည် ။
“မအေ -ိုး………..ငါ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ကွ”ဒီတော့မှ လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် ခေါင်းနပန်းကြီး သွားပါတော့တယ်……သွားပြီ သူ့ဘ၀..။“မင်းလိမ် ထားတာတွေ (၃)ရက် အတွင်း ပြန်ပေး..မပေးရင်……လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် စကားမဆုံးလိုက် သလို လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်လည်း စကားပြောခွင့် မရလိုက်ပါ.. မူလီခေါင်း တပ်ကြိမ်လုံးက လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ခေါင်းပေါ် အချက်ပေါင်းများစွာ ကျရောက်လာပါတော့ တယ်…………။
ဖြစ်ရပ်မှန် စ/ဆုံးလမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နှင့်လူမိုက်ကြီးသူ၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်